नि: शुल्क शिपिंग बनाम छूट | Martech Zone
म यकिन निश्चित छैन कि तपाईले ग्राहक प्रलोभनको यी दुई रणनीतिहरू बराबर गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यस्तो लाग्छ कि छुट तपाईको ईकामर्स साइटमा कसैलाई ल्याउने एक महान् साधन हो, तर नि: शुल्क शिपिंग रूपान्तरण दर बढाउनका लागि तरीका हो। म पनि उत्सुक छु कसरी वफादार मोलतोल पसलहरू हुन्। यदि तपाईं एकदम छूट, मान्छे केहि दिन फिर्ता र खरीद बिना छुट? यदि तपाईं नि: शुल्क शिपिंग प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने, यो तपाईंको साइटको सुविधा हैन जुन सबैले आउँनेछ र अधिक र अधिक प्रयोग गर्नेछ?
एक दिन देखि इन्टरनेट खुद्रा विक्रेताओंले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको शिपिंग शुल्कको प्रतिरोध हो। वेबमा शपिंग व्यक्तिगत रूपमा शपिंग गर्नका लागि, केहि व्यापारीहरूले अनलाइन अर्डरको साथ निःशुल्क शिपिंग प्रस्ताव गर्न शुरू गरे। के नि: शुल्क शिपिंगले वेबसाइट आगन्तुकहरूलाई अझ बढी खरीद गर्न प्रेरित गर्छ? बाट मोनेट इन्फोग्राफिक।
टैग: छुटनिशुल्क ढुवानीअनलाइन किनमेलढुवानी
अनुसूची: सास अपोइन्टमेन्ट एकीकरण
10 B2B मार्केटरहरूको लागि फेसबुक रणनीति